२०७५ भाद्र १७, आईतबार
पोथी बास्नु हुँदैन’ भन्ने कविताका कारण चर्चित बनेकी कवयत्री एवं पूर्व सांसद कुन्ता शर्माको हाल धरानमा बस्दै आएकी छिन् । कपाल सेतै फुलिसकेको अवस्थामा भर्खरै शर्माको नयाँ कविता संग्रहसमेत बजारमा आएको छ ।
पूर्वसांसद शर्माले यसवीचमा एमाले पार्टी परित्याग गरेर माओवादी रोजिन् । उनी माओवादीमा लागेपछि प्रचण्ड र वैद्यवीच फुट भयो । शर्मा वैद्यतिर लागिन् । तर, त्यहाँ पनि उनलाई चित्त बुझेन । र, अहिले लेखनमा मात्रै सक्रिय बनिरहेकी छिन् । महिलाको पक्षमा कलम चलाउँदै आएकी कुन्ता व्यभिचारी पुरुष र ‘कान्छी पस्न आउने महिला’ का बारेमा भने आक्रोश पोख्छिन् । त्यस्ता ‘यौन रूपमा विकृत’ व्यक्तिहरुलाई साहित्यमा प्रमुख पात्र नबनाउने उनी बताउँछिन् ।
नयाँ पुस्ताका लेखक/लेखिकाहरुलाई कुन्ता शर्माको सुझाव के छ भने समाजका अन्तरविरोधहरु र महिलामाथि भइरहेका उत्पीडनबारे गहिरो अध्ययन गरेर कलम चलाउनोस् ।
वृद्धावस्थामा पनि साहित्य साधनामा सक्रिय बनिरहेकी पूर्वसांसद शर्मासँग गरिएको अन्तरंग कुराकानी हामीले पाठकसमक्ष पस्केका छौं ।
तपाईं पूर्वी नेपालको धरानमा जन्मनुभयो, हुर्कनुभयो र यहीँको स्थायी बासिन्दा भएर कार्यक्षेत्र पनि धरानलाई नै बनाउनुभयो । नेपाली साहित्यको विकासमा धरानको के–कस्तो भूमिका छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । धरानको माटो साहित्यको लागि अत्यन्त उर्वर छ । अहिले नेपाली साहित्यको विभिन्न बिधामा स्थापित साहित्यकारहरुको पृष्ठभूमी हेर्नुहुन्छ भने उनीहरु धरानबाटै स्थापित भएका छन् । पूर्वी पहाडबाट शिक्षा आर्जनको क्रममा धरान बस्दा नै उनीहरुको साहित्यकार व्यक्तित्व निर्माण भएको हो । साहित्य होस् या राजनीति धरानले जन्मजात धरानेलाई भन्दा बाहिरबाट आएका मानिसलाई नै अवसर दिएर स्थापित गर्ने गरेको छ । त्यस मानेमा पनि नेपाली साहित्यको विकासमा धरानको योगदान प्रशस्त छ ।
हाल केही आसलाग्दा युवा प्रतिभाहरु पनि धरानको साहित्यिक मञ्चमा देखापरिरहेका छन् । उनीहरु उदार र उर्जावान छन् । पलायन हुन लागेका र दुव्र्यसनमा फसिसकेका बुढापुराना कविहरुलाई पनि सरसहयोग गरेर हौसला बढाउन प्रयासरत छन् उनीहरु । तिनीहरु थोरै छन् तर पनि सक्रीय छन् । धरानको गौरवमय साहित्यिक यात्रा जो बीचमा निकै अवरुद्ध भएको थियो उनीहबाट अगाडि बढने कुरामा म आशाबादी छु । जहाँसम्म मेरो कुरा छ धरान मलाई अत्यन्त सुन्दर र प्यारो लाग्छ । मैले पहिलो चोटि धरानको धरतीलाई स्पर्श गरेकी थिए, धरानको प्रकृतीलाई नै पहिलोपल्ट आँखाभरिभरि हेरेकी थिए । मेरो जन्मस्थान धरान मलाई आमा जत्तिकै प्यारो लाग्छ । अपबाद स्वरुप केही नगन्य क्षुद्रहरु बाहेक मैले यहाँका आम मानिसहरुबाट धेरै नै स्नेह र सद्भाव पाएको छु । यहाँका मानिसहरु ले लगाएको गुण म कहिल्यै तिर्न सक्तिन जस्तो लाग्छ मलाई । हुन त मलाई धरतीका हरेक टुक्राहरु उत्तिकै सुन्दर र प्रीय लाग्छन् तर पनि मेरो शरीर यही माटोमा विसर्जित होस् भन्ने चाहना रहेको छ मेरो भनौ धरानकै आकाशमा म अन्तिम स्वाश लिन चाहन्छु ।
साहित्य क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ?
बुबा देवीको उपासक हुनुहन्थ्यो । वहाँ देबीका सुन्दर अनि लयबद्ध पव भजनहरु सस्वर गाउनुहुन्थ्यो । मेरो बाल्यकाल देवीको सुन्दर अनि तेजस्वी रुपको बर्णन संगीतमय स्वरले सुन्दै वितेको थियो । घरको बाताबरण संगीतमय थियो । म सानो हुँदा हाम्रो घरमा महानन्द सापकोटा, छविलाल पोख्रेल, टीकाप्रसाद बस्ती लगायतका विद्वानहरुको आवतजावत भइरहन्थ्यो । बुबा र वहाँहरुको बीचको कुराहरु म ध्यान दिएर सुन्थे । त्यस बाहेक पनि घरमा गोरखापत्र,मनुस्मृति, दासबोध, सत्यार्थप्रकाश लगायतका धार्मीक साहित्यका किताबहरु ल्याइन्थ्यो । अक्षरहरुसंग परिचय भएपछि त्यस्ता कितावहरु पढ्ने अवसर पाए मैले । त्यसबेला पढेको भनौ लगभग साठी वर्ष अगाडि पढेको चौविस हरफको अत्यन्त सुन्दर छन्दोबद्ध कविता अहिले पनि मुखाग्र छ मलाई ।
कविता विधालाई नै किन रोज्नुभयो ? के का लागि, किन कविता लेख्नुहुन्छ ?
सुरुमा कविता बिधा नै किन रोजियो त्यसको खासेै कारण त थाहा छैन तर पछिपछि भने कविता आए पछि समय, स्थान र वातावरण खासै नचाहिने भएको कारणले भनौ जहाँ जसरी पनि लैख्न मिल्ने भएकाले नै कवितामा धेर्रै कलम चलाइयो । फेरि मेरो जीवन अनि यसको वरपरको परिवेश पनि व्यवस्थित , शान्त र अनुकुल भएन । मैले जे जति रचनात्मक कामहरु गरे ती सवै नै अत्यन्त प्रतिकुल र तनावयुक्त परिवेशमा नै गरे । यिनै विबिध कारणले कविता बिधा सहज र प्रीय रह्यो मेरा लागि । त्यसो त म कविता बाहेक कथा र निबन्ध पनि लेख्छु ।
सुरुसुरुमा त हावामै लेखियो कविता बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य । किशोरावस्थाको उन्मुक्त वातारण, प्रकृतीको सघनता , खोलानालाहरुको स्वच्छन्द गीत, यिनै कुराहरु प्रेरकतत्व बने शायद ।फूलहरुको , झरनाहरुको, कोयलीका मधुर स्वरहरुको बारेमा कविता लेखियो । किशोरी हुदा मेरो कविताको विषय यस्तै रह्यो । म एक्ली छोरी रहे धेरै समय । निकै पछिमात्र मेरो भाइको जन्म भएको हो । मेरो लालनपालन सुन्दर र सभ्य वातावरणमा भयो । कलह, अभाव र अशान्ति लगायतका समस्याहरु मैले बाल्यकालमा बेहोर्नुपरेन ।
समग्रमा सरदर बालकहरुकोभन्दा मेरो बाल्यकाल रमाइलो र आल्हादपूर्ण थियो । सत्ताइस वर्षको उमेरसम्म भोक, गरीवि र कलह कुन बस्तुको नाम हो मैले थाहा पाइन । माध्यामिक कक्षामा पढ्दासम्म म धेरै कुराहरुको बारेमा अनभिज्ञ थिए । बुबाले आमा कुटेको, जथाभावी गालि गरेको कहिल्यै सुनिन मैले । गाउँमा एउटा मानिस थियो । ऊ रक्स्याहा थियो र प्रत्यक साँझ स्वास्नी कुट्ने गथ्र्यो । यो म अलि सानै हुँदाको कुरा हो । त्यसबेला हाम्रो सानो गाउँमा भएका बाहुन, क्षत्री र नेवार समुदायका मानिसहरु घरमा कुटपिट गर्दैनथे भनौ उनीहरुको घरबाट कोलाहालका स्वरहरु प्रवाहित हुँदैनथे ।
मेरो भर्खरै किशोराबस्थामा उक्लदै गरेको मस्तिष्कले धेरै कुरा छानविन गर्न सक्दैनथ्याे त्यसबेला । म जिज्ञासु भएता पनि धेरै कुरा बुझ्दिनथें । त्यो स्वास्नी भकुर्ने मानिस राई जातको हुनाले मलाई लाग्थ्यो राइहरुले परिवार कुटपिट गर्दा रहेछन् । पछि दुईबटी स्वास्नी भएको ढकाल थरका मानिस हाम्रो घरमा भाडामा बस्न आए । उनका स्वास्नीहरुको बातबातमा झगडा परिरहन्थ्यो । ती ढकाल धेरैजसो जेठीलाई र कहिलेकाहीँ कान्छीलाई पनि बेस्सरी भकुर्थे । त्यसपछि मात्र मलाई थाहाभयो कि जातले होइन, अनियन्त्रित पागलपनले मानिस कुटपिटमा उत्रँदो रहेछ ।
उमेरका सिढीहरु उक्लदै गएपछि म समाज अध्ययन गर्दै गएँ, यसका विषमताहरु थाहा पाउँदै गए । मान्छेको कुप्रवृत्तिहरु बझ्दै गएँ । मान्छेको दुष्टपना र अन्याय अत्याचार अध्ययन गर्दै गएँ । स्वयं म आफैंले पनि धेरै शारीरिक र मानसिक यातना भोगे । म सुन्दर शान्त प्रकृतीको साम्राज्यबाट धेरै कमजोरी र खराबी बोकेको मानिसको प्रवृतिमा केन्द्रित भएर कविताको विषय बस्तु रोज्न लागे । मान्छेलाई पिरोल्ने मानिस र उसको बिरोधमा कविता लेख्न लागे । जीवन र जगतलाई माक्र्सबादी दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्दै यी सव समस्याहरुबाट मानिस कसरी मुक्त हुनसक्छ भन्ने सोच राखेर तमाम कुप्रवृतिहरुको विरोधमा कविता लेख्नलागे । मानिसलाई दुःख दिने युद्ध, रोग, भोक, अभाव र सोक लगायत तमात उपनिवेशवादी, साम्राज्यबादी अनि विस्तारबादी युद्धपिपासुहरुको विरुद्ध कविताको विषय रोज्न लागें । अत्यन्त परिश्रमी, असिमित धैयर्ता र करुणाले ओतप्रोत भएका महिलाजातिहरु मेरो कविताको विषय बन्नलागे । लिङ्गकै कारणले पछि पारिएका, हेपिएका, अपमान गरिएका अझ भनांै गर्भबाटै विनास गरिन थालिएका महिलाहरुको पक्षमा कविता लेख्न थालें । यसरी जब संसारका सब बेथिति र अन्यायको कुराहरु सुन्दा, पढ्दा र भोग्दा मन आक्रान्त हुन्छ मनलाई मलम लगाउन पनि म कविता लेख्छु ।
कविताको विषय कसरी रोज्नुहुन्छ ? तपाईका कविताले दिने सन्देश के हुन् ?
विषय रोज्नु त कुन गाह्रो कुरा भयो र ? यो पितृसत्तात्मक, वर्गीय अनि पतनोन्मुख समाजमा जताततै चित्त नबुझ्ने कुराहरु बगे्रल्ति भेटिइहालिन्छ अनि तिनै विषयहरुलाई लिएर मनमा उम्लेको आक्रोशले नै कविताको जन्म हुन्छ । म कसैमाथि अन्याय भएका पनि सहन गर्न सक्दिन । हिँड्दा हिँड्दै सडकमा कुनै चित्त नबुझ्ने घटना भनौ कुरा देखे भने म त्यही नै जेहाद छेडिहाल्छु । त्यस्ता कुनैकुनै घटनाले पछि गएर मलाई निकै नै घाटामा पारेका पनि छन् । तर के गर्नू मैले बाल्यकालदेखि त्यस्तै नै सिके । अन्यायको बिरोध गर्न सिके । मेरो बुबा त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो । मलाई त्यस्तै सिकाउनुभयो । मेरो लेखनमा पनि यस्तै कुराहरु आउँछन् । मेरो समस्या होइन, म किन छुच्चो हुने भने जस्ता कुरा मलाई मनपर्दैन ।
म भरसक मेरा रचनाहरुबाट यस्तै सन्देश दिन चाहन्छु । मैले धेरै दिन अन्याय सहे , दमन र दुव्यबहार सहे । यस्ता कुराहरु सहनु हुने रहेनछ । महिला भने पछि ठूलाठूला कुरा गर्नेहरुले पनि निकै हेप्ता रहेछन्, पाइतालामुनि राख्नखोज्दा रहेछन् । अाफ्नै कमाई खानु, अाफ्नै शीपमा बाच्नु अनि लगाम लगाएको चारखुट्टे झै यन्त्रणा भोग्नु । हामी महिलाहरु सहेरै पछाडि परेका रहेछौ । शक्ति त हामीसंग पुरुषसंगभन्दा धेरै गुणा छ । जस्तो भन्नोस् हामी पुरुषको छत्रछाँया बेगर पनि बाच्न सक्छौं । तर, ल त एउटा मात्र पुरुषले पनि महिला बिना बाँचेर देखाओस् त ? यिनै कुराहरु बुझेर अब नचाहिने कुराहरु सहनुभएन । अाफ्नो शक्तिलाई चिन्नुपर्‍याे भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु मेरो कविताबाट । किन कि ठूलो संख्यामा भएका नारीहरु कमजोर भए भने समाज मात्र होइन देश पनि कमजोर हुन्छ ।
तपाईंका कवितामा नारी विद्रोहका आवाज आउँछन् । नारीवादी कविता लेख्नुहुन्छ नि भन्नेहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
यो देशको जनसंख्यामा एकाउन्न प्रतिशत महिलाहरु छन् । सम्पत्तिको वितरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै न्युन प्रतिशत छ । शिक्षाको प्रतिशत पनि नगन्य छ । राजनीतिमा महिलाहरुको स्थान आसलाग्दो छैन । बहुबिवाह, बालबिबाह र अनमेल बिबाहहरु भइनै रहेका छन् । बलात्कार र हत्याका समाचारहरु पनि हामी लगातार पढिरहेका छौं । दुई महिनादेखि पचहत्तर बर्षसम्मका महिलाहरु हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । कसैलाई मारिएको छ , कसैको जिब्रो काटिएको छ । यो परिवेशमा साच्चै भन्ने हो भने मेरा महिला सम्बन्धी कविताहरु एकदमै कम छन् । जम्माजम्मी एक दर्जन जति होलान् ।
महिला सम्बन्धी केही कविता लेख्दा महिलावादी भइन्छ भने त्यो आरोप मलाई स्वीकार्य छ । फेरि महिला समस्यालाई एकदमै नजिकबाट भोगेको, देखेको अनि व्यहोरेको मजस्तो महिलाले लेखेका महिला समस्यासम्बन्धी कविताजति जीवन्त व्यभिचारी पुरुप या कसैकी कान्छी पस्न जाने महिलाहरु लेख्न सक्षम होलान् त ? तिनमा त पीडाका क्षणहरुमा आफ्नै बग्ने आँशु र नाटकगृहमा ग्लिसरिनको प्रयोगले बग्ने आसुजत्तिकै फरक हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईको विचारमा एउटा शक्तिशाली कविता रचना गर्न के–कस्ता कुराहरू आवश्यक पर्लान् ?
सबभन्दा ठूलो त लेखकीय इमान्दारिता नै हो । त्यसपछि लेखकको चुनैति र खतरा मोल्नसक्ने साहस पनि हो । सत्यको पक्षमा बोल्न र लेख्न त्यति सहज छैन । त्यो त पोथी बास्नु जत्तिकै हो । पितृसत्तात्मक समाजले युगौदेखि निर्माण गरेका धरापहरु छिचोल्न अहिले पनि त्यति सजिलो छैन । त्यसपछि एउटा गतिलो विषयवस्तुलाई सम्प्रेषणीय बनाउन कलापक्षमा पनि त्यतिकै ध्यान पुर्‍याउनु पर्नेहुन्छ । विचार र कलाको उचित समन्वयले मात्र शक्तिशाली भनौ कालजयी कविताको रचना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । म पनि यसकुरामा सदा प्रयत्नशिल रहेको छु । सफल छु या छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने जिम्मा त मेरा श्रोता र पाठकहरुलाई नै दिन्छु
तपाई निक्कै पातलो लेख्नुहुन्छ । यति पातलो लेख्नुको कारण बताइदिनुहोस् न ।
लैख्न त म लेखिनै रहेकीछु । प्रकाशन गर्ने मामलामा म अलि हतारिन्नँ । कविता छिटै छापिहाल्नुपर्छ नभए त्यसको सान्दर्भिकता हराउँछ भन्ने भनाइमा म सहमत छैन । केही महिना, केहीवर्ष मै सान्दर्भिकता हराइहाल्ने कविता र पार्टीका पर्चानाराहरुमा के फरक रह्यो र ? कविताहरु लामो समयसम्म बाच्नेखालका लेख्न र छाप्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ र प्रयास रहन्छ मेरो । लामै समय पछि भए पनि हालै मेरो दोस्रो कविता संग्रह “मेरो मान्छे” सांग्रिला प्रकाशनबाट बजारमा आइसकेको छ । ५४ बटा कविता भएको उक्त संग्रहमा म बाचेको परिवेश भनौ वर्तमान विश्वका मानिसले भोगिरहेका विविध समस्या र उहापोहको बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरेकी छु । अव अर्को पचासवटा जतिको तेस्रो कविता संग्रहको तयारीमा विस्तारै लागिरहेकी छु ।
तपाईले संस्मरण पनि लेख्दै गर्नुभएको छ कि ?
हो संस्मरण २०४२ सालसम्मको लेखिसके । चाडै नै पूरा गर्छु होला । कविता बाहेक कथा र निबन्ध पनि लेख्छु । एउटा तीनसय पेज जति लामो कविता कृति लेखिसकेको छु र चानचुन एकसय पृष्ठ जति त टाइप पनि गरिसकेकी छु । लेखेका कृतिहरु छरपस्ट भएका छन् । छापिइसकेका दुई दर्जन कथाहरुको पनि अत्तोपत्तो छैन । कमसे यिनीहरुलाई खोजतलास गरेर पाठकहरुसम्म पुर्‍याउन पाए मेरो ठूलो धोको पूरा हुने थियो । कविता बाहेक कथा र निबन्ध पनि लेखेको छु । तिनीहरु पनि एकएकवटा संग्रह पुग्ने छन् । कविताबाट लयात्मक तरिकाले पाठकहरुसम्म अाफ्ना कुराहरु राख्न सकिन्छ भने आख्यानबाट अझ बढी व्यापक ढंगले भन्नखोजेका कुराहरु व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
आजको नेपाली कविता कुन अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाली कविता विश्व कविताको हाराहारीमा छ । त्यसो त विश्वसाहित्को गहन अध्ययन छैन मेरो तर पनि मैले पढेका केही कविताहरुको नेपाली कवितासंग तुलना गर्दा हाम्रा कविताहरु पनि कम छन् जस्तो लाग्दैन मलाई । नेपाली कविताले प्रतिश्पर्धा गर्ने मञ्च पाएको छैन । खोई नेपाली कविताको अनुबाद ? खोई नेपाली कवितालाई तुलना गर्ने ठाउँमा पुर्‍याइएको ? यसकुरामा हामी अत्यन्त पछाडि परेका छौ । अंग्रेजीमा राम्रो दखल हुने विद्धानहरुबाट विना भेदभाव कविताहरुको छनोट गरेर विश्वबजारमा पुर्‍याएपछि मात्र नेपाली कवितामा कति शक्ति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यसखालको काममा प्रोत्साहन भए जस्तो लाग्दैन मलाई ।
प्रगतिवादी नेपाली कविताचाहिँ कुन अवस्थामा छ ?
अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने प्रगतिवादी कवितानै नेपाली कवितामा सर्वाधिक लोकप्रीय रहेको महशुस भएको छ मलाई । गोपालप्रसाद रिमाल, भूपी शेरचन आदिका कविता जनमानसमा निकै नै लोकप्रीय रहेका छन् अनि देवकोटाको मुनामदन बाहेकका कविताले पाठकको मन त्यति धेरै जित्न सकेको देखिदैन । प्रगतिवादी कविताले विगतमा निकै दमन बेहोर्नू परेको कारणले यो सुन्दर शिल्प र बढी प्रतिरोधी क्षमताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । राणा शासनकालदेखि ०४६ सालसम्म लेखिएका कविता अनि जनयुद्धको समयमा लेखिएका कविताहरु शिल्प तथा विचारको हिसावले उत्कृष्ट छन् । प्रेमालाप, भजनकीर्तन, अश्लिल र तिलस्मी साहित्यले साहित्यको स्तर उकास्नका साथै समाजलाई अगाडि बढाउन सक्तैन।
नेपाली कवितालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचसम्म पुर्‍याउन के गर्नुपर्ला ?
अनुवाद हुनुपर्छ , प्रचार प्रसार पनि हुनुपर्छ । मैले अघिनै भनिसके हाम्रा कविताहरु प्रतिश्पर्धामा पुर्‍याइनु पर्छ । नेपालमा नेपाली भाषामा छापेर कसरी विश्वसाहित्यको मञ्चमा हाम्रा रचनाहरु पुर्‍याउन सकिन्छ र तुलना हुनसक्छ ? त्यसैले अब व्यापकरुपमा हाम्रा कविताहरु अनुवाद गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याइनुपर्छ ।
अहिले प्रदेश संरचना बनिसकेको छ । नेपाली साहित्यको राजधानी प्रदेश नम्बर १ लाई बनाउनुपरेमा के–कस्ता योजना अगाडि सार्नुपर्ला ?
यो विषयमा म अहिलेसम्म अनभिज्ञ छु । मसंग अहिलेसम्म कोही सुझाव वा सल्लाह लिन आएका छैनन् वा भनाैं मलाई बोलाएका छैनन् ।
तपाईं ०५६ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सुनसरीबाट सांसदको रूपमा समेत विजयी हुनुभयो । पछिल्लो समयमा माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुभयो र माओवादी केन्द्रको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभयो । माओवादी वैद्य समूहमा पनि संलग्न हुनुभयो । साधारण मान्छेहरू/पाठकहरूलाई साहित्य र राजनीतिबीचको भेद देखाउनु पर्दा अाफूलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ?
म ०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको सांसदमा विजयी भएकी थिएँ । एमालेमा तीब्र गुटबन्दीको भएको अवस्थामा मैले विनाकारण धेरै अपवाद सहनुपर्‍याे । संस्थापनपक्षमा मानिसहरुले पार्टी फुटेको बेला जित्ने सांसद हो, पार्टीको पुरानो र इमान्दार कार्यकर्ता हो भन्ने सामान्य मोलाहिजा पनि राखेनन् । ममाथि घोर अन्याय भयो । म अन्याय सहन सक्ने स्वभावकी भएकी भए पञ्चायती दमनको बेला मौनसाधेर बस्ने थिएँ पक्कै पनि । हत्केलामा ज्यान राखेर सबैखाले खुला आन्दोलनमा सहभागी हुने थिइनँ होला । यस्तै विविध कारणले मैले एमाले परित्याग गरें । अरुलाई सक्दिनँ, कान्छाबाबुलाई राख्दिनँ भनेको जस्तो व्यवहार गरियो । स्वतन्त्ररुपले बसिरहेका बेला माओवादीहरुले बोलाएर सम्मानजनक जिम्मेवारी पनि दिए । तर, त्यहीबेला माओवादी पार्टी विभाजन भयो र बैद्यतिर लागियो । तर, केही समय काम गरेपछि त्यहाँको गतिबिधिबाट पनि निराश भएर म लेख्नतिरै लागें । लामो समयसम्म स्वतन्त्र बामपन्थी भएर लेख्न र पढ्नमा समय बिताएँ ।
आजभोलि त सबै मानिसहरु राजनैतिक हिसाबले सचेत भइसकेका छन् । दश वर्षकोे जनयुद्धले धेरै धनजनको क्षति भएको भए पनि मानिसहरुमा राजनीतिक चेतना ह्वात्तै बढेको छ । जो हाम्रो जस्तो देशका लागि अनिवार्य छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको चेतना नै हो । मानिसहरुमा आएको तीब्र चेतनाकै कारण नेपालमा यति धेरै परिवर्तन सम्भव भएको हो । साहित्यले लेखकमा भएको चेतनालाई पाठक भनौं, आम मानिसहरुसम्म पुर्‍याउँछ र जागृत गराउने काम गर्छ । अथवा मेरो बुझाइमा साहित्य र राजनीति एकअर्काका परिपूरक हुन् ।
तपाईँ एक सचेत नारी हुनुहुन्छ । नेपाली समाजमा महिलाहरू कुन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ?
केही न केही परिवर्तन त भएको छ । महिलाहरु अलिअलि कुरा बुझ्नेसम्म भएका छन् । तर अझैं पनि महिलाहरुको अवस्था सन्तोष गर्न लायक छैन । आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा अन्य हिसावले पनि महिलाहरु अझैं धेरै नै पछाडि पारिएका छन् । खटाएर दिएको लिएर सन्तोष गर्ने स्थितिमा छन् । राजनीतीमा हेर्ने हो भने पनि उपहरुको थुप्रो लागेको छ । जताजतै उपहरु मात्र छन् । किन महिलाहरुले उच्च स्थानमा बसेर काम गर्न सक्दैनन् र ? पुरुषहरुले महिलाको नेतृत्व स्वीकार्दा के हुने । महिलाहरुकै काखमा हुर्किएका होइनन् र उनीहरु ? महिलाहरुले नै ताते गर्दै बोल्न सिकाएका होइनन् र ? के मानेमा कम छन् आमा जातिहरु ? तर, यस कुरामा महिलाहरु आफैं पनि अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुमा चेतनाको कमी छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर मात्र पनि हुँदो रहेनछ । मूलत आफ्नो शक्ति चिन्न सक्नुपर्ने रहेछ । अाफूलाई कमजोर बनाउने, भोग्या सम्झने मानिस र प्रवृतिहरुको विरुद्ध जाइलाग्न सक्ने हुनुपर्ने रहेछ ।
महिलाहरु किलामा बाँधिएका गाईहरु जस्ता छन् । डोरी खोलिदिए पनि किलाबाट यताउता जान नसक्ने । लामो समय पनि त भयो महिला हिंसाको । लहरा जस्तो पराश्रित भएर बाचेको । सतिसाल जस्ता दृढ महिलाहरु तितेझार जस्तो कमजोर ठानिन्छन् र बनाइन्छन् पनि त्यस्तै । यो सवै चेतनाको कमीको कारणले भएको हो । समाजमा महिला शोषण अहिलेसम्म कायम छ । त्यसको स्वरुपमा मात्र परिवर्तन आएको छ ।
उहिले महिलाहरु दहन हुन्थे, बैधव्यको पहाड बोकाइन्थ्यो, सौतेनी पीडा सहनुपथ्र्यो भने हाल लिङ्ग परिक्षण गरेर आँखै नखोलेका महिलाको भु्रणहत्या गरिन्छ । यो त झन भयानक भएन र ? सुरक्षित गर्भपतनको नाममा प्रत्येकजसो गाइनो सेन्टरमा महिला भ्रुणका विनास गरिन्छ । सन् २०१५ मा मात्र एक करोड महिला भ्रुण विनास भएको आँकडा बाहिर आएको । यो स्थितिमा महिलाहरुको कलम किन मौन छ ? यसको चर्को बिरोध किन गरिएको छैन ? यो विषयमा युवा पुस्ताका प्रखर र प्रतिरोधि चेतना भएका महिला कविहरु जागरुक भएका छैनन् ।
नेपाली साहित्यमा थुप्रै स्रष्टाहरू छन् । तीभन्दा तपाईं के अर्थमा फरक हुनुहुन्छ भनेर पाठकले भने भने तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मसंग समाजलाई अध्ययन गर्ने मार्क्र्सवादी दृष्टिकोण छ । म अहंभाव राख्दिनँ र हरदम सिकि नै रहेकी अवस्थामा छु । कतिपय अग्रज श्रष्टाका कविताहरु राम्रो लागे पनि म ती रचनाहरुको प्रभाव मेरो कवितामा पर्न दिन्न र नयाँनयाँ विषयहरुको अन्वेषण गर्न रुचाउँछु ।
एउटा यौनविकृत पुरुष या महिलालाई म प्रमुख पात्रका रुपमा छनोट गर्दिनँ । अनि सासूबुहारीका गनगन र ईष्र्या जस्ता कुराहरुमा पनि म मेरो समय खर्च गर्दिनँ । म छाप्नकै लागि लेख्दिनँ ।
नयाँ पुस्ताका साहित्यकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
त्यस्तो खासै केही पनि बाकिरहे जस्तो लाग्दैन । म युवा साहित्यकारहरु अझ विशेषतः महिला साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरुले समाजको गहिरो रुपले अध्ययन गर्नुपर्छ । यो बर्गीय र पतन्नोमुख समाजले कसरी महिलाहरुलाई बजारको बस्तुको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ? कसरी पशुभन्दा तल उत्रेर बलात्कार तथा यौन शोषण गरिरहेको छ ? कसरी महिलाहरुको अपमान र लाञ्छना गरिरहेको छ ? यस्ता कुराहरुले सर्जक दुख्नुपर्छ, करुणाले ओतप्रोत हुँदै सघनरुपले यसको बिरोध अाफ्ना कृतिहरुमा गर्नुपर्छ । रुञ्चेपिञ्चे कायर होइन, सवल पात्रहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले चाहिने जति मानसिक घर्षण र विषयको उत्कृष्ट प्रस्तुति देख्न पाइएको छैन । कसैले एउटा विषयमा कविता लेख्यो भने यता वा त्यता गरेर त्यही विषयमा लेख्ने गरेको देखिन्छ । त्यसले नयाँनयाँ समस्याहरुको उत्खनन् र प्रस्तुति हुन सक्तैन ।
अच्युत घिमिरेका अन्य लेख तथा रचनाहरु
गुम्बाका संरक्षकविरुद्ध बालयौन दुर्व्यवहारको मुद्दा